Asphyxia ny zaza vao teraka sy ny hypoxia ny zaza vao teraka - inona no fahasamihafana ary inona no vokany?
Asphyxia ny zaza vao teraka - 4 karazany ny fivoaran'ny fisehoan-javatra sy ny vokany ho an'ilay zaza
Asphyxia ho an'ny zaza vao teraka dia fitaratry ny fitomboan'ny taom-piasana. Ity patolojia ity dia miaraka amin'ny fanitsakitsahana ny fizotry ny atidoha sy ny asan'ny rafi-pandrefesana ao amin'ny zaza. Diniho ity fanjakana ity amin'ny antsipiriany bebe kokoa, mamarino ny antony mahatonga azy, ny karazany, ho hitantsika: inona no mampiavaka ny hypoxia amin'ny foetus sy ny asphyxia amin'ny zaza vao teraka.
Inona ny "asphyxia" ao anaty zazakely vao teraka?
Ny asphyxia ho an'ny zaza vao teraka dia toetoetran'ny taova kely izay misy fandikana ny fofon'aina. Amin'io tranga io dia misy fahasamihafana eo amin'ny psykolojia sy ny famaritana ny "hypoxia ny zaza vao teraka." Ny hanoanana oksizenina ( hypoxia ) dia mitombo mandritra ny fitondrana vohoka na ny fiterahana (fampiasana placental, manery ny tadim-poitra), ary miaraka amin'ny tsy fahampian'ny entona oksizenina. Tsy manitsakitsaka ny fizotry ny atidoha. Asphyxia (dabozia) dia manamarika ny fijanonan'ny atidoha tsy tapaka ary mitaky fialantsiny.
Ny antony mahatonga ny zaza vao teraka
Ny asphyxia amin'ny zaza mandritra ny fiterahana dia mety hiteraka olana maro. Amin'io tranga io, ny antony mahatonga ny aretina, dia mety ho mifandray mivantana amin'ny fizotran'ny fitaterana sy ny toetra mampiavaka ny zaza ao am-bohoka. Anatin'ireo hevi-dehibe fototra miteraka asphyxia, manavaka ireo dokotera:
Fahavitàna tampoka eo amin'ny renirano sy ao amin'ny tadim-poitra - kofehy ny tendan'ilay zaza , ny fananganana ny fototry ny fihenam-bidy, fifandonana.
Fanelingelenana ny fizotran'ny fifanakalozana ao amin'ny rafitra utero-placental - fanehoana tsy mety amin'ny toeran'ny toerana, ny fahatapahana aloha sy ampahany.
Tsy fahombiazana amin'ny dingan'ny fampidirana ao amin'ny placenta, vokatry ny tosidra ambony amin'ny reniny.
Ny famerenana ny haavo amin'ny oksizenina ao amin'ny ran'ny renim-pianakaviana - ny anemia , ny aretim-panafem-pahaizana, ny aretin'ny rafi-panafody.
Ny fahasarotan'ny fofona ao amin'ny foetus dia ny tsy fahampian'ny fivoaran'ny lozam-pifamoivoizana, ny fizotran'ny aretina, ny vokatry ny fanafody.
Ireo antony ireo dia miteraka ny ati-psyxia voalohany amin'ny zaza vao teraka, izay mitombo ao anatin'ny dingan'ny fanomezana. Na izany aza, ny asphyxia dia mety ho toetra faharoa ihany koa rehefa misy aretina tonga avy hatrany taorian'ny nahaterahan'ny zazakely. Anisan'ny antony mahatonga ny fipoahana faharoa:
faniriana ny trakta momba ny taovam-pisefoana - ny fluid ao anatin'ny havokavoka;
fanitsakitsahana ny fizotry ny fifindran'ny ati-doha;
ny tsy fahampian'ny havokavoka - ny vatana dia tsy afaka manatanteraka fihetsiketsehana aretin-tsaina;
ny tsy fahampian-tsakafo ateraky ny atidoha, ny fo, ny havokavoka.
Ny diplaoma amin'ny asphyxia ny zaza vao teraka
Miankina amin'ny sary sy ny fahasarotan'ny aretina ny dokotera, manavaka marika patolojia maromaro. Ny fanombanana dia vita avy hatrany aorian'ny nahaterahan'ny zaza tao anatin'ny minitra voalohany. Ny fametrahana ny asphyxia ho an'ny zaza vao teraka dia toy izao manaraka izao:
eo ho eo;
Asphyxia amin'ny neonatal mild
Ny asphyxia amin'ny fahamendrehana dia miavaka amin'ny tsy fisian'ny tabataba, na dia eo aza ny fihetsiky ny zazakely. Ny fofon'ilay zaza vao teraka dia mahaleo tena, nefa miadana sy tsy marefo. Ny tongony sy ny tanany dia manana aloky ny hafanam-po, tsy miasa ny asan'ny fo. Taorian'ny fanadiovana ny trakta avoakan'ny rivotra sy ny fluid, mitazam-pandrosoana (mampihetsi-po ny lamosina), ary ny fitsaboana oksizenina amin'ny alàlan'ny saron-tava, dia voajanahary ny feon'ilay vao teraka.
Ny zaza teraka ao amin'ny toetry ny ati-psyxia dia tsy manana olana amin'ny fofona. Amin'ity tranga ity dia mety hitera-doza kely ny neurologique, amin'ny endriny:
fampitomboana ny tonelina;
tremoran'ny tanana, tongotra, valanampy ambany.
Asphyxia misy fahasamihafana eo amin'ny zaza vao teraka
Izany fahasamihafana izany dia miavaka amin'ny tsy fisian'ny fitabatabana amin'ny fotoana hahaterahana. Amin'ity tranga ity dia tsy voamarina ny fanehoan-kevitra momba ny fikikisana an-tanana. Ny toetra mampiavaka an'io endrika io dia fiovana eo amin'ny lokon'ny hoditra, noho izany dia matetika antsoina hoe asphyxia manga ny zaza vao teraka. Ny fihetsiketsehana manelingelina dia natiora tokana, na izany aza, ny fihetsika ataon'ny fo dia tsy manelingelina.
Ny fampiasana ny asphyxia amin'ny zaza vao teraka dia mitaky fitsaboana. Mba hanaovana izany, dia matetika ny mampiasa kitapo manokana, indraindray masira oksizena. Ny endriky ny pôrôsy dia mamela marika foana momba ny fahasalaman'ny zazakely, manosika ny fanovana ny neurologika:
Mihamitombo ny fitombenana - mihorakoraka, mihorakoraka ny tongotra sy ny tongotra;
Ny fahaketrahana - siny tetezana marefo, fihetsika maotina (mihetsika amin'ny sandry sy ny tongotra dia tsy vita).
Asphyxia misy fianarana ambony amin'ny zaza vao teraka
Ny tsy fahampian-tsakafo tanteraka amin'ny fotoam-pahaterahana dia ny tsy fahampian'ny aretina. Mihena ny hoditra vokatry ny tsy fisian'ny ra. Noho izany, ity endriky ny patolojia ity dia antsoina hoe asphyxia fotsy amin'ny zaza vao teraka. Rehefa manadina fitsapana manintona ilay zaza, dia tsy mihetsika ilay izy. Misy ny fanitsakitsahana ny rafi-pandrefesana - raha mihaino mozika ny fo raha miongotra na tsy tanteraka. Manana bradycardia matanjaka.
Io asphyxia ho an'ny zaza vao teraka io dia mitaky fiovana haingana. Ny hetsika ataon'ireo dokotera dia mikendry ny hamerenana indray ny asan'ny reny sy ny tsiron'ny zaza vao teraka. Ny zaza dia mifandray amin'ny respirateur. Mandritra izany fotoana izany, ny tadim-poitra dia tarihina amin'ny fanafody izay mamporisika ny asan'ny helo. Ireo ankizy toy izany dia efa ela no mifantoka amin'ny fifehezana ny ordinatera, ary avy eo dia mampitombo ny aretin'ny fifindran'ny aretina, azo atao ny manemotra ny fivoaran'ny neuropsychic.
Fahafatesan'ny zaza vao teraka
Ny fahafatesana ara-pahasalaman'ny zaza iray dia mitranga rehefa mametraka ny tsy fisian'ny famantarana ny fiainana ny dokotera. Ao anatin'izany tranga izany, aorian'ny zaza vao teraka dia tsy mahatsiaro tena loatra ny zazakely, tsy misy ny fihetsika henjana, ny fihetsik'izy ireo koa amin'ny fanentanana. Ny fanaraha-maso marina sy ara-potoana ny fepetra fanentanana dia manome fanantenana ho amin'ny vokatra tsara. Amin'io tranga io dia miankina amin'ny faharetan'ny tsy fisian'ny breathing ny henjana vokatry ny fahasalaman'ny zaza. Ao anatin'izany toe-javatra izany, dia simba ny atidoha.
Asphyxia ny zaza vao teraka - soritr'aretina
Mba hanombanana ny fahavitrihan'io aretina io dia ampiasain'ny dokotera ny refin'ny Apgar. Ny fomba fiasa dia mifototra amin'ny fanombanana indraindray marika maro:
ny asa am-po;
loko ny hoditra.
Ho an'ny parameter tsirairay, misy ny nomerika, izay voavolavola ary ny isa iray dia isam-bolana. Ny vokatra dia toy izao:
dingana mora - 6-7;
mavesatra - ny ankamaroan'ny zaza mahazo punt;
fahafatesana ara-pahasalamana - 0 isa.
Rehefa mampiseho diplaoma miavaka ny mpampivelona, ​​dia manombana ny soritr'aretina ankehitriny. Ny fihenan'ny siramamy amin'ny zaza vao teraka dia mihena ary latsaky ny 100 isa-minitra. Ho an'ny asphyxia mora dia marika:
Ny fofona voalohany dia atao amin'ny 1 minitra;
Mihena kely ny tonelina;
triangatra nasolabial ny lokon'ny manga;
Mihamalemy ny fisefoana.
Miaraka amin'ny salanisa asphyxia mahazatra, dia mametraka ny dokotera:
Ny tongony sy ny tanany dia manga manga;
mihena ny isa;
mihena ny tonelina;
Ny fihenan'ny tadim-poitra dia voamarika.
Ny halalin'ny fisainan'io aretina io dia miseho amin'ny soritr'aretina manaraka:
Tsy misy fisefoana;
pallor ny hoditra;
fampandrosoana ny tsy fahampian'ny adrenal;
pulsation mahery ny tadin'ny tadim-poitra.
Asphyxia ny zaza vao teraka - vokany
Raha miresaka momba ny asphyxia mampidi-doza amin'ny zaza vao teraka dia manamarika ny dokotera fa azo atao ny mamono ny zaza maty vokatry ny fanitsakitsahana. Mitranga izany amin'ny ora voalohany amin'ny fiainana. Amin'ny alàlan'ny halaviran-tseranana sy ny fahamendrehana, dia tsara ny famaritana. Ny vokatra dia miankina amin'ny fotoana fanentanana, ny fisian'ny aretina mifandray. Mety hipoitra ny vokatr'ilay aretina izay nipoitra nandritra ny vanim-potoanan'ny zaza vao teraka, na tamin'ny ora voalohan'ny fiainana, na tamin'ny taonany.
Asphyxia amin'ny zaza vao teraka aorian'ny fiterahana - vokany
Ny asphyxia mafy amin'ny zaza vao teraka, ny vokatry ny fiankinan-doha dia miankina amin'ny fahitsiana sy ny fahatanterahan'ny fitsaboana manomboka, tsy mandalo tsy misy andalan-teny ho an'ny vatana. Mety hitranga ny fahasimban-javatra, na eo amin'ny dingana voalohany amin'ny fivoaran'ny perinatala, ary amin'ny fahanterana. Tsy fahita firy ny atrophy atidoha rehefa asphyxia amin'ny zaza vao teraka. Anisan'izany ny fahasarotana matetika amin'ny vanim-potoana fanarenana:
Asphyxia ny zaza vao teraka - vokatra eo amin'ny taonany
Ny asphyxia sy ny hypoxia amin'ny zaza vao teraka dia mifandray amin'ny fahasarotana amin'ny vohoka izay misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza aorian'ny nahaterahany. Ny olana dia mety hiseho ao anatin'ny volana vitsivitsy, ary indraindray aza taona maro. Anatin'ireo zava-tsarotra taty aoriana:
Ny fitsaboana ny asphyxia amin'ny zaza vao teraka
Rehefa manombana ny lanjany Apgar 4 isa na latsak'aina, izay atao mandritra ny minitra voalohany, ny fangatahana dia ilaina. Ny fiverimberenan'ny zaza vao teraka ao amin'ny asphyxia dia atao ao anatin'ny dingana efatra:
Famoahana ny trakta momba ny taovam-pisefoana, miantoka ny tsy fahampiana azy ireo. Izy io dia tanterahana miaraka amin'ny fanampian'ny kataratra sy onja elektrika. Raha mitrosa ao amin'ny utero ny asphyxia, ny fanodinana ny fanadiovana dia vita avy hatrany aorian'ny fisehon'ny loha.
Mitazona ny fizotry ny fifohana sigara. Ny fanatobiana fanampiny dia tanterahina amin'ny alalan'ny kitapom-batsy, ary raha tsy mahomby ny fampidiran-drivotra ary mifandray ny fitaovana fantsona fanasitranana.
Famerenana amin'ny laoniny ny rafi-pitatitra. Noho izany antony izany, dia misy ny fanasitranana ny vatana mangatsiaka, na dia eo aza ny fatiantoka (miaraka amin'ny bradycardia 60-70 beatsin'ny minitra). Izany dia atao amin'ny fanindriana amin'ny tendrony roa amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny hafanana 100-120 in-minitra. Rehefa tsy tafaverina ao anatin'ny minitra iray ny asa fanasitranana, mandehana any amin'ny ambaratonga manaraka.
Fitantanana medika. Anatin'ity fepetra fitsaboana ity, ny dokotera dia mampiasa ireto fanafody manaraka ireto ho an'ny asphyxia neonatal:
Atropine 0.1% - 0,05-0,1 ml;
Adrenaline 0.1% - 0.02-0,03 ml;
Bikarbonat sody - 1-2 ml.
Mba hisorohana ny fahasarotana lehibe - ny asphyxia zaza vao teraka dia tokony horaisina ny fepetra fisorohana eo amin'ny dingana famolavolana ny fitondrana vohoka, ary rehefa teraka ilay zaza. Anisan'ny torolàlana fototra:
Fanaovana fitsaboana ara-pahasalamana manokana amin'ny vehivavy bevohoka.
Fitantanana ny dingan'ny fifindrana amin'ny fanamarihana ny zava-misy.
Famerenana ny fanaraha-maso entraaterina ny toe-pahasalaman'ny foetus sy placenta (dopplerographie, ultrasound).
Ny fisorohana ny hypoxia mandritra ny asa, ny fahatongavana ara-potoana amin'ny trakta momba ny taovam-pisefoana.
Ahoana no mahatonga ny fiterahana?
Miala aina ny taolam-paty rehefa teraka
Fandotoan-tena taorian'ny fiterahana
Ahoana no fomba fitsaboana ireo sezaary?
Rahoviana no afaka miala voly aho rehefa teraka?
Fizarana Cesarean: ny fiantraikany
Ny sakafo nataon'i Julia Vysotskaya
Fomba hisafidianana anarana ho an'ilay zazalahy?
Mitafy tanana ho an'ny vehivavy bevohoka
Ahoana ny fomba famokarana lasopy pea?
Ahoana ny fomba hikirakira ny jironao?
Andrei Pezhich dia tsy maintsy hizara voninahitra amin'ny Siobhan Atwell!
Niresaka momba ny toetrany ara-pihetseham-po i Angelina Jolie taorian'ny fisaraham-panambadiana
Ny fomba fisainana amin'ny psikology
18 zava-misy manaitra momba an'i Hiroshima sy Nagasaki
Jelly avy amin'ny cranberry
Nandroso ny pataloha
Elagin Palace ao Saint-Pétersbourg
Ahoana ny fomba hampianarana ny york amin'ny diaper?
Mijoroa amin'ny boky amin'ny tananao